Ammaanka Magaalada dhuusa-marreeb oo deggan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusa-marreeb ee xarunta Gobolka galgaduud ayaa sheegaya in xaaladdu ay dagan tahay kaddib dagaal dhexmaray ciidamo taabac sanaa Sarkaal horey Dowladda uga baxay iyo Ciidamada ahlusunna.
Saraakiil u hadlay ahlusunna waljameeca ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen Sarkaalkii dagaalkaas hor-boodayey ee ciidamada dowladda ka baxay.
Dagaalka ayaa intii uu socday waxaa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo tirada la xaqiijiyay ee dagaalkaas ku geeriyooday ay gaarayaan 9 ruux oo Rayid ah halka dad intaa kabadanna ay ku Barakeceen.
Dowlada Soomaaliya oo lagu wareejiyay Gaadiid iyo qalab looga hortago Waxyaabaha qarxa